Mudaharaadyo iska soo horjeeda oo Uppsala ka socda | Somaliska
Waxaa magaalada Uppsala ka socda mudaharaadyo iska soo horjeeda oo ay kala dhigayaan taageerayaasha xisbiga midigta-fog ee siyaasadiisu heyb-sooca ku salaysantahay ee Sverige demokratarna iyo dad ka soo hor jeeda cunsuriyada. Mudaharaadkan oo markii hore ay soo qaban-qaabiyeen taageerayaasha xisbiga xagjirka ah ayaa durbaba waxaa lagala horyimid banaanbax kale oo aan horay u sii qorshaysnayn oo looga soo hor jeedo cunsiriyadda iyo cunsuriinta, taas oo keentay in boolis aad u badani soo buux dhaafiyo goobtii lagu banaan baxayay iyo guud ahaanba inta badan wadooyinka soo gala bartamaha Uppsala. Taageerayaasha Sverigedemokratarna ayaa la sheegay in ay ka caroodeen 3 qof oo ka mid ah xisbigooda oo si xun loogu jir dilay magaalda Uppsala todobaadkii tagay. Ka qayb galayaasha banaanbaxa cunsuriyiinta ayaa intii uu socday waxay aflagaadaynayeen ruuxii ay u gartaan in ajaanib yahay. Ilaa hada lama soo sheegen wax qasaaro ah oo kala gaaray labada dhinac waxaan amaanka si heer sare ah gacanta ugu haya booliska oo dariiqyada si aad u jooga magaaladana diyaarado ku kormeeraya. Saciid Cabdi Cusman Uppsala
Mudaharaadyo iska soo horjeeda oo Uppsala ka socda
Waxaa magaalada Uppsala ka socda mudaharaadyo iska soo horjeeda oo ay kala dhigayaan taageerayaasha xisbiga midigta-fog ee siyaasadiisu heyb-sooca ku salaysantahay ee Sverige demokratarna iyo dad ka soo hor jeeda cunsuriyada.
Mudaharaadkan oo markii hore ay soo qaban-qaabiyeen taageerayaasha xisbiga xagjirka ah ayaa durbaba waxaa lagala horyimid banaanbax kale oo aan horay u sii qorshaysnayn oo looga soo hor jeedo cunsiriyadda iyo cunsuriinta, taas oo keentay in boolis aad u badani soo buux dhaafiyo goobtii lagu banaan baxayay iyo guud ahaanba inta badan wadooyinka soo gala bartamaha Uppsala.
Taageerayaasha Sverigedemokratarna ayaa la sheegay in ay ka caroodeen 3 qof oo ka mid ah xisbigooda oo si xun loogu jir dilay magaalda Uppsala todobaadkii tagay.
Ka qayb galayaasha banaanbaxa cunsuriyiinta ayaa intii uu socday waxay aflagaadaynayeen ruuxii ay u gartaan in ajaanib yahay. Ilaa hada lama soo sheegen wax qasaaro ah oo kala gaaray labada dhinac waxaan amaanka si heer sare ah gacanta ugu haya booliska oo dariiqyada si aad u jooga magaaladana diyaarado ku kormeeraya.
Laanta Socdaalka oo joojinaysa shuruuda 2 sano
asc waaya haan waasoo xumaa naysaa xaalada yurub oo cun suriyiinta ilaahow shartooda aganabad gali anaga iyo intii islaamaba waxaan layaabanahay rajada aan qabno iyo siday siinoqonayso yurub aloo dhulkeenii nabad noogadhig waad kumahadsan tahay war bixinta aad noosoogud bisay